Warbixin: Xawaaladaha Somalida ee Maraykanka oo dib u bilaabay adeegyada xawaaladeed. – Radio Daljir
Warbixin: Xawaaladaha Somalida ee Maraykanka oo dib u bilaabay adeegyada xawaaladeed.
Minneapolis, Jan 15 – Xawaaladaha Soomaalida ee ku yaal dawlad goboleedka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa si gaabis ah ku bilaabay adeeggoodii xawaaladeed kaddib markii ay shaqada joojiyeen 30-kii bishii Dec ee sannadkii aynu soo dhaafnay ee labada 2011-ka.
Dib u hawlgalidda xawaaladaha ayaa ku timid dadaallo aan kala harlahayn oo ay ku dhaqaaqeen jaaliyadda Soomaaliyeed, ururka xawaalad lahady Minnesota iyo dhinacyo kale oo Soomaali ah sida ay noo xaqiijiyeen xubno ka tirsan xawaaladlayda Soomaalidu.
Shaqooyin qunyar socodka ah ee hadda ay bilaabeen xawaaladaha Soomaalidu waa mid aad u hoosaysa oo aan gaarsiisnayn heerkii adeegyada shaqo ee ay qaban jireen, ayna adagtay in ay si dhab ah u kaafiyaan baahida xawilaadaha lacageed, iyadoo hawshu ay tahay mid isku-tashi ee uusan wali jirin cid ay macaamil dhab ah la bilaabeen.
Shaqo joojinta xawaaladaha Soomaaliya Minnesota ayaa timid kaddib markii bangigii ay macmiilka la haayeen, isla markaana ay ka furnaayeen akoonnadoodu ee franklin uu ku wargaliyey in la xirayo akoonnadooda, halkaasina uu ku istaagayo xiriirkii ganacsi ee ay wadaageen bangiga iyo xawaaladaha Soomaalida ee gobolkaasi.
Muddadii xayiraaddu jirtay oo dhammayd 15 cisho saamayn xooggan ayey ku yeelatay kumanaan qoys oo ku tiirsanaa dhaqaalaha dibadda looga soo xawilo, gaar ahaanna intii eheladoodu wax uga soo diri jireen gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka.
Marka laga gudbo dareenka saamayneed ee durba muuqday, waxaa horay u jiray walwal weyn oo ku aaddanaa saamayn xagga nolosho ah oo la soo gudbaanaada qooysas badan oo Soomaali ah haddii xanimaadda xawlaadeed noqo mid sii socota, iyadoo dhinka kale laga cabsi qabay dhabar-jab dhaqaale dalka oo qayb ahaan ku tiirsan waxyaabaha bannaanka laga soo diro.
Inkastoo haatan wuxuu laga bilaabay adeegyadii xawaaladeed qayb ahaanna la yareeyey culayskii baahiyeed ee horay u jiray, haddana wali ka dhammaystirna shaqada xawaaladuhu waxaana ay ku xoogsanayaan si xeeladaysi ah.